BayStream: Iyo Pirate Bay inotibvumidza isu kuyerera nzizi | Linux Vakapindwa muropa
Anenge chero mushandisi anga ave neinternet kwemakore mashoma achaziva Iyo Pirate Bay. Kunyangwe yakavharirwa munyika zhinji, ichiri injini yekutsvaga ye torrent mafaera par kugona. Kugona kutsvaga Iyo Pirate Bay kubva kunyika dzakaita seSpain, tinofanirwa kuzviita kuburikidza ne proxy, chimwe chinhu chinotitadzisa kushandisa sevhisi nyowani iyo yavakatanga kuyedza munguva pfupi yapfuura, kana zvirinani ndizvo zvakaitika panguva yekunyora chinyorwa ichi. Zita rako, BayStream.
Pakutanga, tinogona kushandisa BaySream munzira nhatu. Imwe ndeye kuwana iyo Pirate Bay pasina kushandisa chero proxy. Inoshanda neVPN, asi kwete kana isu tikasvika kuburikidza neproxy. Kana tikatsvaga vhidhiyo faira, nyowani yekutamba icon (katatu kurudyi) ichaonekwa mune mhedzisiro kubva kwatinogona kutamba vhidhiyo iyi tisingafanirwe kuirodha pasi. Kune rimwe divi, BayStream inogona zvakare kushandiswa semhando yerukova mutengi.
BayStream: mutambi, torrent mutengi uye kugovera faira
Kana ikakundikana kurova bhatani rekutamba, iro rinogona kuitika kana tikapinda neproxy, iro peji rinotitorera isu zvakare rinopa batanidza kurodha faira. Kana tikadzvanya pairi, tinogona kudhawunirodha iyo faira kubva kubhurawuza pachayo. Iyi ndiyo PERFECT yemashandisirwo anoshanda ane akarambidzwa mabasa kana maapplication, senge mamwe mafoni anoshanda masystem (ahem, iOS) uko kwatisingakwanise kumisikidza chero torrent vatengi.
Nzira yechitatu yatinogona kushandisa BayStream kugovana mafaera: kana isu tikasvika pawebhu, inowanikwa pa Iyi link, tinoona kuti tinokwanisa kusarudza faira uye, kana rapedza kurodha pasi, teedzera iyo link, woigovana uye wozvirodha kubva kune imwe komputa. Izvi zvimwe zvinoyeuchidza mamwe mabasa se Firefox Tumira, asi BayStream inotibvumidza govana mafaera anosvika 20GB muhukuru.
Zvichida kuti mune ramangwana vanozo gadzirisa tsaona iripo kana ichiedza kutamba mavhidhiyo mafaira nekupinda The Pirate Bay kuburikidza proxy, asi panguva ino inotaridzika zvakanaka kwazvo. Iwe unofungei nezve BayStream?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » BayStream: Iyo Pirate Bay inotibvumidza isu kuyerera nzizi uye nekugovana mhando dzese mafaera